Wasiirka warfaafinta oo la kulamy ergayga Midowga Yurub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka warfaafinta oo la kulamy ergayga Midowga Yurub
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka warfaafinnta Soomaaliya, Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya u fadhiya, danjire Michele Cervone d’Urso oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ugu horeyso sidi Midowga Yurub uu taageero u siin lahaa Wasaaradda.
Mustaf Dhuxulow ayaa danjire Michele Cervone d’Urso uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka, dadaalka wacyigelineed ee wasaaradda, doorka wasaaradda uga aadan hirgelinta qorshayaasha ay dowladdu hiigsaneyso marka la gaaro sanadka 2016-ka iyo halka uu marayo xeerka saxaafadda.
Markii uu soo gaba gaboobay kulanka ay wada qaateen Wasiirka Warfaafinta iyo u qaabilsanaha Midowga Yurub ee Soomaaliya ayey labada mas’uul si wada jir ah warbaahinta ula hadleyn, iyadoo ugu horeyn danjire Michele Cervone d’Urso uu ka warbixiyay booqashadi ay xafiiska Wasiirka ku yimaadeen iyo kulanka ay la qaateen mas’uuliyiinta wasaaradda.
“Midowga Yurub waxa ay xarunta u soo booqdeen inay kulan la qaataan madaxda, waxaana ka wada hadalnay sidii ay gacan uga geysan lahayn taageerada aan siin karno dowladda, meel marinta xeer saxaafadda, waxaana yeelan doonaa kulamo joogta ah oo aan arrimaha nuucaani oo kale ah ee aan la qaadaneyso Madaxda Wasaaradda” ayuu yiri Danjire Michele Cervone.
Wasiirka warfaafinta Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa tilmaamay inuu ku faraxsanyahay booqashada uu xafiiskiisa ugu yimid Danjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya, isagoo uga mahad celiyay taagerada ay siinayaan dowladda.
“Waxaan ka wada hadalnay Wafdiga ka socda Midowga Yurub, sharciga saxaafadda meesha uu marayo, xagga wacyigelinta, in ay naga taageeraan barnaamijyada wacyigelinta ee ay Wasaaradda waddo, runtii arrimo badan ayaan isla meel dhignay” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta.
Xeera saxaafadda Soomaaliya ayaan weli dhameystirmin, waxaana talaabaabada ay Midowga Yurub ku caawineyso Wasaaradda Warfaafinta ayaa fursad u noqoneysa dar dargalinta howlaha wasaaradaas.
Alshabaab iyo Liyu Polis oo ku dagaalamay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya